Cristiano Ronaldo Oo Ka Sheekeeyay Sababta Dhabta Ah Ee Uu Jecaylka Xad Dhaafka Ah Ugu Hayo Macalinkiisii Hore Ee Zinedine Zidane. - Gool24.Net
Cristiano Ronaldo Oo Ka Sheekeeyay Sababta Dhabta Ah Ee Uu Jecaylka Xad Dhaafka Ah Ugu Hayo Macalinkiisii Hore Ee Zinedine Zidane.
August 13, 2019 Mahamoud Batalaale
Cristiano Ronaldo ayaa ilaa hadda jeclaysanaya wada shaqayntii soo dhex martay tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane, wuxuuna Ronaldo ka hadlay qaabkii uu Zidane ugu sahlan wax badan.
Zinedine Zidane oo ahaa tababaraha kooxda Real Madrid B ayaa shaqada kooxda kowaad ee Real Madrid looga magacaabay markii shaqo ka caydhinta lagu sameeyay Carlo Ancelotti oo xidhiidh fiican la lahaa ciyaartoyda Madrid.
Laakiin Zinedine Zidane oo aan markaas khibrad badan lahayn ayaa si layaableh u maamulay ciyaartoydii magaca waynaa ee uu Cristiano Ronaldo ka midka ahaa.
Waraysi uu Ronaldo bixiyay ayuu ku sheegay in Zidane uu isaga ka dhigay mid khaas ah ee kalsoonidii uu siiyay iyo qaabkii ay u soo wada shaqeeyeen. Ronaldo ayaa soo bandhigay halka arin ee uu sida khaaska ah ugu jecel yahay Zidane.
Dhinaca kale Ronaldo ayaa ku dooday in ka hor intii aanu Zidane la shaqayn in uu ixtiraam badan u hayay balse markii ay wada shaqeeyeen uu sii laba jibaarmay ixtiraamkii uu hore ugu hayay.
Cristiano Ronaldo ayaa waraysi uu siiyay DAZN waxa uu kaga hadlay kalsoonidii uu Zinedine Zidane kaga helay Madrid wuxuuna yidhi: “Kalsoonida uu ciyaartoy u baahan yahay kama timaado oo kaliya ciyaartoyga naftiisa, laakiin waxay sidoo kale ka timaadaa dadka isaga ku xeeran”.
“Waxaad u baahan tahay in aad dareento in aad qayb muhiim ah ka tahay kooxda isla markaana Zidane aniga waxa uu iga dhigay mid khaas dareemay” ayuu Ronaldo hadalkiisa raaciyay.
Ronaldo oo ka hadlaya caawintii uu Zidane ka hadlay ayaa yidhi: “Isagu in badan ayuu aniga i caawiyay. Haddaba ixtiraam badan ayaan isaga u hayay, laakiin la shaqayntiisu waxay aniga iga dhigtay in aan la dhacsanaado in ka badan”.
Cristiano Ronaldo ayaa soo bandhigay hadalkii uu Zidane ku yidhi markii ay Madrid ku wada shaqaynayeen wuxuuna yidhi: “Waxa uu isagu ii sheegay: ‘Cristiano, raaxayso, bax oo ciyaar ciyaartaada, adigu waxaad tahay qofka farqiga samaynayee’. Markastaba isagu daacad ayuu ahaa, taasina waa sababta aan markasta jacayl isaga ugu hayo”.
Zinedine Zidane iyo Cristiano Ronaldo ayaa waqtigii ay Madrid joogeen waxay saddex xili ciyaareed oo xidhiidh ah ku soo wada guulaysteen koobka UEFA Champions League balse xili ciyaareedkii la soo dhaafay oo ay Madrid ka maqnaayeen ayay Los Blancos dhibaato wayn la kulantay.